Buphi obungcono bokukhuphela umculo kumgangatho weFLAC? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Buphi obungcono bokukhuphela umculo kumgangatho weFLAC?
Umculo kumgangatho weFLAC unokukhutshelwa simahla ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki apha apha.
Kulungile ukhetho oluninzi lokukhuphela, umculo wale mihla, kwaye okona kubaluleke kakhulu, i-antivirus ayifungi kule ndawo, kuba iisayithi ezininzi azikuvumeli ukukhutshelwa.
Ukukhuphela umculo kwifomathi ye-FLAC, kwaye hayi kuphela, ungasebenzisa umkhondo we-rutor.org, onendlela entle yokujonga kunye nekhwalithi ephezulu yokukhangela eneendlela ezahlukeneyo zokukhangela, ukulungiselela lula.
Kwi-FLac umculo osemgangathweni unokukhutshelwa kwinani elikhulu lesiza. Ungathayipha le mfuno kwi-injini yokukhangela kwaye uya kukunika ukhetho lwewebhusayithi. Okanye kwangoko yiya kule ndawo ujonge ubume onomdla kuyo.
Ifomathi yomculo ethi: Qu; Flacquot; hayi eyona ixhaphakileyo. Ngaphandle koku, kukho indawo ezimbalwa apho ungamamela khona kwaye ukhuphele umculo wale fomathi.
Enye yezi ndawo apho unokukhuphela khona umculo wale fomathi yile. Unokuzikhuphela umculo weFLAC kule ndawo.
Khuphela umculo kumgangatho weFLAC unokukhuphela apha. Ukukhetha umculo omnandi. Unokufumana ngokukhangela nayiphi na ingoma oyifunayo kule fomathi. Kwakhona kwisiza kukho iingoma ezininzi ezidumileyo.
Kuyenzeka ukuba ukhuphele umculo kwifomathi eyandisiweyo yomculo njenge-FLAC ukusuka kwiiforum zomculo ezahlukeneyo ezibandakanya oku, kunye neendawo. Ndinganikeza ngeendlela ezininzi. Nantsi enye yazo: ukulandela le khonkco, uya kusiwa kwindawo elungileyo. Nantsi inketho yesifufula apho unokukhuphela umculo kule fomathi.
Unokuzikhuphelela umculo kwifomathi yomculo ye-FLAC eyandisiweyo ukusuka kwiiforum ezininzi zomculo ezikhethekileyo kunye neesayithi, umzekelo apha, okanye apha. Uninzi lweealbum zomculo zeFlac ziyafumaneka kwi-tracker trackers, umzekelo, apha.
Mna ngokwam rhoqo ndihlala ndikhuphela umculo kwindawo yeZaitsev. Emva kwayo yonke loo nto, simahla apho kwaye unokukhuphela nayiphi na umculo kunye nawuphi na umgangatho. Ndikwacebisa ukuba usebenzise iinkonzo zale ndawo
rutracker.org Kuya kukunceda ufumane umculo kwi-FLAC. Wonke umntu owakhayo wahlukile apho.Umntu uneengoma ukusuka ku-44100Hz-48000Hz okanye ukusuka kwi-96000-192000Hz .Ngoko ke, uya kuyifumana le nto uyikhangela kwitracker.Ndicinga ukuba le yeyona tracker ilungileyo apho. phaya, kukho iifilimu, imidlalo, nezinye izinto ezininzi.
Kunzima kakhulu ukufumana umculo onjalo, kuba kuya kufuneka nokuba ukurekhodwa kwestudiyo phantse kwasekuqaleni, okanye kwisibini esibuyiselweyo. Ngenxa yobunzima bokusebenza kwengxelo enjalo, kuyabiza. Kodwa kukho indawo ezininzi ezigcina udumo lwazo, ezinje ngeflacme.ru kunye neklabhu.ru, kodwa ayisiyiyo yonke into endiyikhuphele apho, ndiyithandile. Maninzi amaqela kwiVKontakte, kodwa kukho inkunkuma, awukwazi ukuchitha ixesha lakho.
Imibuzo ye-61 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,285.